घरभाडा लिन नमिलेपछि मर्मतका नाममा रकम बुझ्छन् प्रदेश सभाका सांसद
जनता समाजवादी पार्टी लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डेय रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ को (क) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् ।
पाण्डेय रूपन्देहीकै स्थायी बासिन्दा हुन् । उनको रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा घर छ ।
उनले २०७६ असोजदेखि घर मर्मतसम्भारका नाममा मासिक ७ हजार ५०० रूपैयाँका दरले प्रदेश सभाबाट बुझ्छन् ।
घर मर्मत सम्भारको रकम बुझ्नेमा पर्छन्, कपिलवस्तुबाट निर्वाचित नेकपा सांसद् विष्णु पन्थी पनि । कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर १ को (क) बाट निर्वाचित पन्थीको बुटवल– २ मा दुईतल्ले घर छ । उनको घर र प्रदेश सभा भवनको दूरी झण्डै दुई किलोमिटर छ । आफ्नै गाडी समेत रहेका पन्थीले प्रदेश सभाबाट घर मर्मतका नाममा मासिक उही ७५ सय रूपैयाँ बुझ्छन् ।
प्रदेश सभाका विपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खान पनि घर मर्मतबाट प्रदेश सभाबाट पैसा लिने सांसदमा पर्छन् ।
रुपन्देहीको क्षेत्र नम्बर ५ (ख) बाट निर्वाचित खानले प्रदेश सभाबाट घर मर्मत खर्च बुझ्छन् । उनको पनि रूपन्देही लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा आफ्नै घर छ । त्यस्तै घर मर्मत खर्च बुझ्नेको सूचीमा नेकपा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालको नाम शुरूमै छ ।
रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ५ को (क) बाट निर्वाचितको उनको सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा घर छ ।
प्रदेश सभाको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने, कांग्रेस सांसद अष्टभुजा पाठक, बसिउद्धिन खाँन तथा रमा अर्याल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, पुष्पा थरुनी, तुलसीप्रसाद चौधरी, डा. कृष्ण न्यौपाने र कमला विकको पनि रूपन्देहीमै घर छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएसँगै रूपन्देही घर भएकाले ७५०० र घर नभएकाहरू तथा अन्य सांसदहरूले १५ हजार पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारले रूपन्देहीमा घर हुनेले घरमर्मत सम्भारको रूपमा मासिक ७ हजार ५ सय र रुपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तर घर नभएकाहरू र अन्य जिल्लाका सांसदहरूले १५ हजार घरभाडा बुझ्ने बताए ।
‘प्रदेश सभा अवस्थित जिल्लामा घर हुने को–को हुनुहुन्छ भनेर सचिवालयले पत्राचार गरेको थियो,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसमध्ये १३ जनाले घर भएको जानकारी पेश गराउनुभयो । उहाँहरूलाई घर मर्मतका नाममा ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार ७५ सय र अन्य माननीयहरूलाई १५ हजार घरभाडाको व्यवस्था गरिएको छ ।’
८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा रूपन्देहीबाट मात्रै प्रदेश सभामा १९ जना सांसदहरूको प्रतिनिधित्व छ । रूपन्देहीमा अलिशान घर भएका आर्थिक हैसियत बलियो भएका सांसदहरूले पनि प्रदेश सभाबाट वार्षिक झण्डै १ लाख घर मर्मतका नाममा राज्यकोषबाट रकम बुझ्दै आएका छन् ।
नलिने घोषणा गरेकाले पनि बुझ्छन् रकम
काठमाडौंमा घर भएका प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले घरभाडा लिएको खबर बाहिर आएपछि रूपन्देहीमा घर भएका नेकपाका प्रदेश सभाका घरभाडा नलिने घोषणा गरे ।
नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दधिराम न्यौपाने, डा. कृष्ण न्यौपाने, कमला विकले हस्ताक्षर गरी प्रदेश सभा सचिवालयमा भाडा नलिने जानकारी गराएका थिए । तर, अहिले उनीहरूले समेत घरभाडाको नाम नराखी घर मर्मतका नाममा रकम बुझ्दै आएका छन् ।
‘घरभाडा लिएनौं, मर्मत खर्च लियौं’
सांसदहरूले आफूहरूले घरभाडा नलिएको र मर्मत खर्च मात्र लिएको दाबी गरे ।
नेकपा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने, ‘हामीले घरभाडा लिँदैनौं भनेका हौँ । लिएका पनि छैनौं । मर्मत सम्भार खर्चचाहिँ लिएका छौं । घर त मर्मत गर्नुपर्‍यो । बिग्रिरहन्छ ।’
यसैबीच सुशासनविद्हरू भने यो सांसदले नैतिकता देखाउनुपर्ने विषय भएको बताउँछन् ।
‘लिँदैनौं भनेको प्रतिबद्धतामा पनि नअडेर फेरि मर्मतका नाममा सुविधा लिनु आफ्नै वचनमा अडिन नसक्नुु हो । नैतिकताले लिन नमिल्ने सुविधा पनि लिनेलाई केही भन्न सकिँदैन,’ सुशासनविद् खेमराज रेग्मीले भने ।